जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ ? स्वीकृति नलिएका प्लटिङको जग्गा रोक्का हुन्छ - समायोजन खबर
जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ ? स्वीकृति नलिएका प्लटिङको जग्गा रोक्का हुन्छ
१७ पुस, काठमाडौं । स्वीकृति नलिई जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) गरेको पाइएमा कारबाही गरिने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि स्थानीय निकायको सिफारिसमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म काठमाडौँमा १८०, ललितपुरमा १०० र भक्तपुरमा १० वटा प्लटिङले मात्र स्वीकृति लिएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । “स्वीकृति…